ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Armenia (SaseNtshonalanga) Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Iban Isi-Indonesia Isi-Ukraine Isi-Umbundu Isi-Urdu IsiBhunu IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPersia IsiPolishi IsiPutukezi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTarascan IsiTatar IsiTigrinya IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiXhosa IsiZapotec (SesiLachiguiri) IsiZulu
OFAKAZI BAKAJEHOVA eSaponara, idolobha eliseSicily, bathola isibhebhe esiyisikhumbuzo ngenxa yomsebenzi wabo wokusiza ngemva kwesikhukhula esahlasela leyo ndawo.
Ngo-November 22, 2011, amadolobha nezindawo ezisesifundazweni saseMessina, kwahlaselwa isikhukhula esinamandla. Kusihlwa ngalolo suku, eSaponara, ukudilika komhlaba kwabulala abantu abathathu​—ingane nabantu abadala ababili.
Ngemva kwenhlekelele, oFakazi BakaJehova bahlela futhi bahlomisa amaqembu ezisebenzi zokuzithandela ukuba asuse udaka nemfucumfucu ezindaweni ezilimele kakhulu.
Amaqembu asebenza neziphathimandla futhi asiza lapho kwakunesidingo esikhulu khona. Aqhubeka esebenza ngisho nangemva kokuba isimo sesidambile. Babalelwa ku-50 kuya ku-80 oFakazi abasiza, kuhlanganise nalabo ababevela ezindaweni eziqhele ngamakhilomitha angaphezu kuka-97.
Izakhamuzi eziningana ezazihlaselwe yile nhlekelele yemvelo zababonga kakhulu oFakazi. Imeya yezwakala ithi ngokuphindaphindiwe, “ Niyisibonelo ngempela! ”
Ngemva kwezinyanga ezinhlanu, uFabio Vinci, ilungu leKhansela, elimelela umasipala, wanika ibandla loFakazi BakaJehova lakuleyo ndawo isibhebhe esiyisikhumbuzo.